October 9, 2021 - Babal Khabar
Oct92021 by बबाल खबरNo Comments
यी काम भुलेर पनि नगर्नुस नत्र अाइपर्ला यस्तो संकट , हेर्नुहोस कुन कुन काम हुन त ?
पुरा खबर, हिन्दू धर्मग्रन्थ गीता को शुत्र छ ‘योगः कर्मसु कौशलम्’ अर्थात जुन काम गर्नु हुन्छ एकदम लागेर गर्नुस् । यो श्लोकको अर्थ जुन काम गर्नु हुन्छ त्यसमा पुरै ध्यान लगाउनुस्, दक्षता, कुशलता सबै त्यसमै लगाउनुस्। फरक फरक काम गरेर टाउको दुखाउने मानिस सँधै असफल हुन्छ । यस्ता मानिसले स्वास्थ्य, सन्तोष र सुख महसुस् पार्न सक्दैनन् । आजकल सबैको जीवन दौडधुपमा वित्छ । जिम्मेवारीका कारण मानिसहरुलाई खाना, स्वास्थ्य वा आरामका लागि पनि समय पुग्दैन।धर्म ग्रन्थका अनुसार हाम्रो जीवनमा हम्रो जीवन खाना मात्र नभएर ध्यान, योग, विचार, अध्ययन, चिन्तनमा समेत आधारित हुन्छ । शास्त्रमा सांसारिक दृष्टिबाट शारीरिक परिश्रम र पुरुषार्थको पनि महत्व बताइएको छ । अल्छी बनेर बसिरहनु भन्दा पनि शारीरिक परिश्रम गर्नु नै राम्रो रहेको शास्त्रमा उल्लेख छ । शास्त्रमा यी ५ काम भुलेर पनि गर्न नहुने उल्लेख छ । १
के तपाईंको हातको नङ फुलेको छ ? हेर्नुहोस के कारणले फुल्ने गर्छ र जान्नुस यस्को अर्थ
पुरा खबर अघि यो भिडियो , प्राय:मनिसहरुले आफ्नो हातको रेखा हेरे’र भविष्य हेर्ने गर्ने गर्दछन । आफ्नो दिन चर्य कसरी बित्ने छ भने पनि हात हेर्ने गर्दछन ।त्यति मात्रै होइन तपाईको हात हेरेर तपाईको स्वास्थ्यबारे पनि थाहा पाउन सकिन्छ । हातको प्रत्यक नङमा रहेको से’तो आधा चन्द्रमा निशान’बाट पनि तपाईको स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर पत्ता ल’गाउन सकिन्छ । नङको तल्लो भागमा सेतो आधा चन्द्र बनेको हुन्छ । नङको अरु भागभन्दा त्यो भाग अलि धेरै सेतो हुने गर्छ । त्यो नंङको एउटा प्रमुख भाग पनि हो । यस भागलाई ल्याटिन भाषामा ‘लुनुला’ भनिन्छ । यसलाई नेपालीमा सानो चन्द्र पनि भन्ने गरिन्छ । यो निशान कुनै डि’जाइन भने पक्कै होइन । यसले तपाईको स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने रहस्य समेत खोल्ने गर्दछ ।चीनको परम्परागत स्वास्थ्य समुदायमा यसलाई कसैको स्वा’स्थ्य मापन गर्ने ब्यारो’मिटरको रुपमा लिइन्छ । लुनुलाले तपाईको स्वा
तपाईंको यस्ता बानिले गर्दा नै तपाईंको हातमा पैसा टिक्न दिँदैन, के हो त्यस्तो बानी जान्नुस !
पुरा खबर अघि यो भिडियो , मानिसले सकेसम्म आफ्नो जीवनमा धेरैभन्दा धेरै धन कमाउन चाहान्छ । धन कमाउन चाहेपनि धेरैले सोचेजस्तो धन कमाउन भने सकेका हुँदैनन् । धन कमाउनका लागि मानिसमा भाग्य कर्म योग्यता र क्षमताले ठूलो भूमिका राख्दछ । साथै कतिपय हाम्रा संस्कार र बानीका कारण पनि धन कमाउनको लागि प्रभाव पार्दछ । हिन्दू धर्मअनुसार धनकी देवी लक्ष्मीलाई चिनिन्छ । लक्ष्मीको कृपा र आशीर्वाद मिलेमा मात्र धन कमाइन्छ नत्र लक्ष्मीलाई बेखुसी बनाएमा जतिसुकै मेहनेत र प्रयत्न गर्दा पनि धन नकमाइन सक्छ या धन व्यर्थमा नष्ट हुन सक्छ । यी बानी जसले लक्ष्मी रिसाउँछिन् र उसको जीवनमा ठूलो आर्थिक अभाव खड्किन्छ । १.सूर्य उदाएपछि उठ्ने र सूर्य अस्ताउने बेला सुत्ने यी दुवै काम धनकी देवी लक्ष्मीको लागि अप्रिय हुन्छ । यस्तो बानी भएका मानिसप्रति देवी देवताको क्रिया हुँदैन । २.कयौंपटक हाम्रो कपडा फाट्छ र मैलो भए प
यी राशी हुने युवतीलाई घरको बुहारी बनाउनुहोस तपाईंले घर स्वर्ग समान हुने छ !
पुरा खबर अघि यो भिडियो , ज्योतिष सास्त्र हामी जो कोही धेरै विश्वास विश्वास गर्छौ । हुन पनि हो, ज्योतिष विज्ञान भनेको हाम्रो मानव जीवनमा जोडिएको एक शास्त्र हो । ज्योतिष शास्त्रले भनेका र भविष्यवाणी गरेका कतिपयकुराहरू मिलिरहेका छन् । ज्योतिष सास्त्रले नै तपाईं हाम्रो भुत भबिस्यको बारेमा चर्चा गरेको हुन्छ । यस्तै मध्य एक राशि अनुसारको व्यवहारको पनि निकै चर्चा हुने गर्दछ । मानिसका फरक फरक राशि अनुसार उसको व्यवहार फरक हुने गर्दछ । राशी अनुसार मानिसको स्वभाव हुन्छ । विवाहको सम्बन्धमा पनि राशि अनुसार नै वैवाहिक सम्बन्ध र परिवारको निर्धारण रहने गर्दछ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यी तल दिएका राशि हुने युवतीहरू धेरै राम्रा र सफल बुहारी बन्न सक्छन् । वृष राशीः वृष राशि हुने युवतीहरु धेरैनै समझदार हुन्छन्। आफ्नो मात्र खुशी मात्र नभई पूरै परिवारको खुशीलाई यस राशि हुनेहरु प्राथमिकतामा राख्छ
चम्चाले खाना खाने बानी छ ? जानिराखौं चम्चाले खाना खानु राम्रो कि नराम्रो ?
पुरा खबर अघि यो भिडियो , भोजन ग्रहणका केही संस्कृति रहेका छन् । हातले गरिने भोजन, काँटा वा चम्चाले गरिने भोजन वा चपिस्टिकले खाइने खाना । नेपाल लगायत भारत वा दक्षिण एसियाली मुलुक लगायतका देशमा परापूर्व कालदेखि खाना विशेष गरि भात खाँदा पाँच औंलाको प्रयोग हुने गरेको छ । तर पछिल्लो चरणमा हातले खाना खान घिन मान्ने र चम्चा वा काटाको प्रयोग गर्ने नयाँ पुस्ताको संख्या बढ्दो छ ।भात मुछेर हातले खाने पुस्तामाथि नयाँ पुस्ताले खिसि टिउरी गर्ने नभएका पनि होइनन् । यसबाट तपाईले ला’ज मान्ने गर्नु भएको छ भने पनि पि’र नगर्नुहोस् । हातले मुछेर खाने खाना पूर्वीय संस्कृतिको हिस्सा मात्र नभएर वैज्ञानिक पनि रहेको छ । हात फोहर भएको अवस्थामा चम्चाको प्रयोगलाई अस्वभाविक मान्न सकिँदैन । तर हात सफा गरेर खाना खाँदा त्यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ । आयुर्वेदका अनुसार खाना पाँच औंलाको संगमबाट बन्ने मुद्राले